Ukuqashwa Kwebhayisikile Kagesi - I-FuturEnergy
Ukuqashwa Kwebhayisekili Kagesi
Ukuqashwa Kwebhayisekili Kagesi lulangokusheshaukuphambukisasibonga iFururEnergy
I-E-Bike: ibhayisekili kagesi eco-esimeme ekuyisa kude
Il ukuqasha di Amabhayisekili kagesi ithembisa ukuletha ukuphefumula kokusha kanye nokuguquguquka kwendlela yokuhamba uzungeze idolobha. Ukufunda, esimemenezimo futhi nemvelo imvelo emabhayisekili kagesi zingasiyisa kude zisisize ukuze sihlale silungile. Lekuqaleni e-bike kukhiqizwa ngo-2001, ngo Amabhayisekili we-Apache futhi wazalwa ngentando yabalandeli abane, abasebenza kulo mkhakha selokhu kwaqala imakethe yamahhala eCzech Republic.
Ngo-2008 kwethulwa owokuqala i-e-Bike futhi eminyakeni eyi-10 Amabhayisekili we-Apache iba ngomunye wabaholi bezimboni e-Central Europe.
Isabelo esikhona samanje se UPedal wasiza amabhayisekili kungumphumela wokubambisana okuthelayo okuqaliwe nenkampani yakwaDamil Components ngenhloso yokwandisa imakethe yayo endaweni yase-Italy. Kuze kube manje ukuqoqwa kwe Amabhayisekili kagesi inama-27 izinhlobo ezahlukene zemisipha no-55 eBike, esukela kokulula I-City Bike kwabasezingeni eliphezulu kakhulu eBike yasezintabeni.
I eziningikusimangazekunenzuzoizinzuzo ze-E-bikes
Azisekho izindleko zezinkanyezi kaphethiloli nophethiloli. Akudingeki ume kuma abasabalalisi. Ngubani orenta eyodwa e-bike sindisa, ngoba eyethu ibhayisekili Shaja kabusha ngeugesi. Futhi nge-recharge ungahamba amakhilomitha amaningi.
Akusekho traffic yedolobha
Le e-bike mancane futhi agobile. Ngenxa yokusebenzisa kwabo, ithrafikhi yedolobha ngeke isaba yinkinga. Ngeke usakwazi ukunamathela kuma-traffic jamu angenasiphelo futhi uzofika lapho uya khona ngokushesha nangokuthula okuphelele.
Ikhambi lakho konke impilo
Le Amabhayisekili kagesi bakusiza ekwenzeni ezemidlalo futhi uhlale ulungile. Sibonga u Ukuqashwa nge-e-bike uzoba nobunye obungeziwe bokuhlala uphilile futhi ukhuphule inhlala-kahle yakho. Futhi bazokwenza ukuthi uthole izindawo eziningi ezintsha.
Izici Zokuqasha Okusebenzayo Kokubheja Kukagesi
Ikusasa kuphakamisa, kubo bonke e-bike ikhathalogi yayo, uhlelo lwe Ukuqasha Okusebenzayo kulula, okusheshayo futhi okusebenzayo.
Il ukuqasha okusebenzayo enye indlela yokuthenga nokuqasha evumela ukuthi wena ukwazi ukubakhona isikhathi esinqunyelwe izimpahla nezinsizakalo. Zonke ngemuva kwe ngemali encane imali yesikhathi. I lula kwe Ukuqasha Okusebenzayo iqukethe ukuphepha kohlelo olusobala noludidiyelwe. Bonke abadlali abasensimini bayazuza kuyo: bobabili labo abathathe insiza enhle noma yokuqasha, yiba mncane ongumnikazi wangempela wesakhiwo.
Ikusasa yenza ukusetshenziswa kwalolu hlelo olulula nolusebenzayo ukuvumela wonke umuntu ukuba alusebenzise Ibhayisekili kagesi, ukuthatha ithuba Ukuqasha Okusebenzayo. Ngamanani ashibhile kakhulu, uzothola ithuba lokukhetha kumamodeli amaningi, kusuka I-City Bike fino alla I-Mountain Bike, ngokwezidingo zakho.
Phakathi kwamamodeli atholakalayo, uzothola, isibonelo, i Amabhayisekili ka-Bi Max, inhlanganisela ehlakaniphile yenduduzo, ukwakheka nokusebenza.
Ukududuzeka nokuqina kungenye yezici ezimbili zethu ezihlukile Amabhayisekili kagesi, ngenxa yobuchwepheshe obunqenqemeni njengeukushaqeka kwentwasahlobo kuhlaka. Ubuchwepheshe besentwasahlobo, empeleni, buqinisekisa ukungaguquguquki kokusebenza kanye nokuzwela okuphezulu ngisho nokufaka emiphumeleni imiphumela emincane kakhulu. Ukuphepha okukhulu kubuye kuqinisekiswe kumigwaqo engeyona yomgwaqo ngenxa yamasondo anikeza imoto uzinzo oluphelele kuzo zonke izinhlobo zomhlaba.A
Amabhasikidi aqhubekayo nge-Eco
Bangani bemvelo, Amabhayisekili kagesi azingcolisi imvelo. Bathulile futhi bakuthatha yonke indawo.
Ayikho i-RCA noma i-Auto Stamp
Le emabhayisekili kagesi bakusindisa nomsebenzi wesitampu nomshuwalense, ngoba bakhululiwe ngokusemthethweni ekukhokhweni kwabo.
I-copyright © 2019 TrovaWeb srl - nge-Ansaldo Patti, 26 - 98121 Messina (ME) - Italy